Wixii Farmaajo laga diiday ma laga aqbali doonaa Xasan Sheekh? (Qaadka Kenya) - Caasimada Online
Home Warar Wixii Farmaajo laga diiday ma laga aqbali doonaa Xasan Sheekh? (Qaadka Kenya)
Wixii Farmaajo laga diiday ma laga aqbali doonaa Xasan Sheekh? (Qaadka Kenya)
Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya waxaa laga doodayaa fasixidda Qaadka ka yimaada wadanka Kenya. Nairobi waxay qarka u saaran tahay inay dib u hesho suuqeedii Qaadka ee Soomaaliya.